Kuwa uu shaydaanku duufsaday dilkoodu waa muqaddas, oo markii ay dugsiga soo galaan wuxuu wadaadku kula dhacaa caradii uu shaydaanka u qabey iyo mid uu ilmahaas u qabo, waayo wuxuu aamminsan yahay in ay ilmahaas iyo shaydaanku isu xodxotaan sida Cabdiqaasim Salaad Xassan iyo Daahir Riyaale Kaahin ay afka isugu dhuubaan.
Inta aynaan xaqdarrada albaabbadeeda waaweyn furfurin baynu sheegaynaa qiso xariir la leh in qofkii aan xafidaadda ku fiicnayn loo maleeyo in uu shaydaanka calaaqaad la leeyahay. Aniga 7 sano jira ayaan waxaan dareemay in aan aad ugu fiicnahay xafidaadda maansooyinka, oo aan gabayga markii la mariyo sidii uu ahaa ugu soo celin karey. Xeesha aan wax u xafidayey aniga ayey igu abuurnayd, ee ma ahayn wax aan cid kale u gudbin karey, waxaana jeclaa in habeen iyo maalin maanso cusub la ii mariyo iyo in aan anigu dadka maanso u mariyo.
Caydaasi waa mid aan xad lahayd oo ay ugu sahlan yihiin ”Nacallaa waalidkaa ku yaal!” iyo ”Doofaaraddii ku dhashay ...!”. Markii caweysinka geela la gaaro waxaa carruurta lala dhacaa dhenged, waxaana lagu yiraahdaa: ”U soo godol geela eyohow eygu dhalay!”. Inta geela la maalayo caydii ugu darnayd baa socota, laakiin waxaa qaynuunka ka mid ah in aan la isku xanaaqin, oo ninkii xanaaqaa waa ”Buulkujire” oo uu macneheedu yahay ”Nin aan weligiis meel uu rag joogo arag ee buulkii hooyadiis ka yimid”. Ninkii noloshaas soo maray labo arrimood buu la yaabaa, waana in la isku xanaaqo iyo in aan sidii la doono loo wada hadlin ee hadalka lala kala gabbado.
Qofkii dariiqo ama koox gaar ah oo diineed ku dhexhaftaa wuxuu ku jiraa qol ciriir ah, oo ka daran midkii nebi Yuusuf lagu xiray muddada dheer ama midkii uu Bardacad ku xirnaa 17 sano. Noloshiisa wuxuu ku dhammaysanayaa in uu dad kale farta ku fiiqayo, oo uu leeyahay ”Kuwaas ha la iska ilaaliyo!”, wuxuuna meesha ka saarayaa in ay suurtegal tahay in ay kuwa uu ishaarayaa hayaan aragtiyo iyo cilmi uu u baahan yahay.
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay nabad ee colaad iyo xin uma uu baahna. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa la dhegaysto oo si anshax ah loola doodo. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay in aan la xaman oo aan lagu xadgudbin. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay in aan bulshada laga xigsan ee uu ra’yigiisa soo gudbiyo, oo intii rabtaa ay ku raacaan inta kalena ay si fiican ula doodaan ama ka aamusaan. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay in aan mabda’iisa iyo dhaqankiisa lagu caayin, laguna dilin ee laga dhegayso oo laga qaato ama aan laga qaadan. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay in ay wax u kordhaan oo uu jahliga iyo maskaxda liidata ka horumaro.
Haddaba qofkii dariiqo ama firqo gooni ah ayaamo la jooga, oo maansooyin nabiga scw iyo shiikh Cabdulqaaddir-Jiilaani lagu faaninayo ama buugaag yaryar oo qabuuraha iyo lebbiska dumarka qodqodaysa lagu qiireeyo, oo markaas dadka kale aragtiyohooda ku caaya ama kula diriraa wuxuu la mid yahay mashiin la daaray, oo aan ilaa uu shidaalku ka dhammaado ama uu qofkii lahaa damiyo guuxa joojinayn.
Haddaba markaas bulshadu qabyaalad keli ah bay haysteen, waxaase jirey arrimo yaryar oo ay wadaaddada laftoodu dadka ku saamaynayeen. Arrimahaasi waa in wax kasta oo ay wadaaddadu xoolo ku rabaan lagu raaci jirey. Tusaale ahaan haddii ay wax khuraafaad ah oo ay dadka maskaxda kaga xadayaan keenaan lagulama doodi jirin, ee waa lagu raaci jirey, waxaana sanad kasta dalka ku soo kordhi jirey khuraafooyin ku bilawday xoolojacayl, sida riyooyin iyo hab cusub wax la isugu tufo.
Sarkaal Itoobiyaan ah baa wuxuu ogaadey in ay soomaalidu sadaqo aan ujeeddo lahayn wadaaddada la hoosrooraan, wuxuuna ogaadey in uu ninkii weli loo maleeyaa xoolo badan ka helayo soomaalida. Qorshe fiican oo uu dadkaas aan fakarayn kaga xoolaysto ayuu cabbaar ka fakarey, wuxuuna helay arrin weyn oo aan looga horrayn.
Saraakiil Itoobiya iyo carabaha jawaasiis u ah ayaa weligood Soomaaliya gaafwareegayey, waxayna dalka ku joogeen awliyanimo iyo daacinimo. Habeenkii uu Maxamed Siyaad dalka inqilaabay ka hor ayaa Itoobiya laga ogaa in uu dalka afgenbi ka dhacayo, waxaana sirahaas gudbiyey saraakiil tahaliil u tufi jirey saraakiishii dalka inqilaabay. Haddaba iska ilaahi in aad jaajuus gaamurey daaci iyo weli u malaysid, oo yaan lagu dhagrin ee maskaxdaada keli ah kaasho.
Qof kastaa haddii uu aragtida shiikhiisa iyo midda qabiilkiisa meel ku uruursado, oo kuwa kale ka beri noqdo muxuu faa’iidayaa, muxuuse dad u kordhin karaa? Qabiilku waa waxa ugu weyn oo maskaxda dila, waana bad moolkeed uusan qof liitss ka dabaalan karin. Haddii ay qofka maskaxdiisa qabyaaladi gasho ma uu fakari karo, waxna ma uu fahmi karo. Xaqdarrada ugu daran oo carruurta koraysa lagu sameeyaa waa in qabyaalad lagu ababiyo, oo aan in ay fakaraan la barin, ee dhaqan dibdhacay iyo tacasub lagu barbaariyo.
Ereyga ”Mujiso” macnihiisu waa wax laga caajisey oo aan la awoodin in la sameeyo, oo ka baxsan awoodda caadiga ah ee qofka. Mucjisadu waa wax weyn oo uu qofku u jeedo, laakiin uusan waxba ka oran karin, waxna ka qaban karin. Haddaba anigu waa aan ka caajisey in aan faalleeyo sida ay mucjisada qabyaaladdu u xaalufiso qofka soomaaliga ah maskaxdiisa.
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 2, 2003